China girazi mukombe & saucer yakatarwa, 90cc Espresso magirazi Makapu ane Saucers, makapu ane Golden Handle, yeEspresso nekofi, girazi rakapetwa negirazi mukombe vagadziri nevatengesi | FUXINGYE
girazi mukombe & saucer yakatarwa, 90cc Espresso magirazi Makapu nemaSuucer, makapu ane Golden Handle, yeEspresso nekofi, saizi yakabwinyiswa negirazi mukombe
Kuumbwa: seti ye2, seti ye4 seti ye6 nezvimwe
Girazi ESPRESSO SET INOSANGANISA: espresso magirazi makapu ane van cleef shape saucer kana ruvara glazed saucer kana rimed saucer, imwe neimwe 90cc kofi yekapu uye 4.5 inches inches saucer. Imwe neimwe espresso yakapfurwa mukombe inobata 90cc (isina kuizadza kumusoro chaiko). Yakakura zvakakwana kune yako espresso yezuva nezuva uye kofi.
YEMAHARA GRADE NEW BONE CHINA NEGirazi: Iyo espresso magirazi makapu ane matsva emabhonzo china saucers akagadzirwa neakakwira epamhando yepamusoro kuchengetedza kwako uye rugare rwepfungwa, Tungamira-YEMAHARA, YISINA-TOXIC, chip-nemishonga uye yakasimba kwazvo.
ZVINOGONESESA UYE ZVINOGONESESA: Nemubato wakasununguka wemukombe, munwe wako unogona kupfuura napo, zviri nyore kubata. Yakasimudza sosi yerimu ine yakakomberedza nzvimbo induction zviri nyore kubata kofi yako mukombe, kofi kiyi, shuga kana mukaka packet.
MULTI-USAGE: Iyo kapu yekofi uye saucer seti yakanakira espresso nekofi. Nakidzwa ne espresso yako mune ino inonakidza uye isina nguva mufashoni dhizaini dhizaini makapu akaiswa.
CHIPO CHEMAHARA: Mukombe weTi uye saucer yaive yakanakisa uye yakarongedzwa zvakachengeteka. Uye neruvara runobata maziso uye rwakasarudzika, chipo chakatsiga cheshamwari dzako uye mhuri paKudziya Imba, Muchato, Zuva raMamai, Zuva reMadzibaba, Kisimusi uye Zuva reGore Idzva.
Nakidzwa nehupenyu hwako, Nakidzwa nenguva yako yekofi neyedu girazi makapu nemuto!
Nakidzwa nemasikati akanaka!
Uchishandisa espresso makapu uye saucers, sekungomwa iyo inonaka kofi mune yepamusoro-yekupedzisira kofi shopu. Espresso mukombe uye saucer set yakashongedzwa ne glossy goridhe trim uye yakashata dhizeti, yakasarudzika sarudzo yako yemasikati kofi nguva. inogona kuvandudza mhando yehupenyu hwevanhu, uye iwe unogona kunakidzwa nemasikirwo mamiriro eakasununguka runako.
Yese espresso / kofi mug inobata 90cc kana 150ml, (isina kuizadza kumusoro chaiko), seti yechina kana seti ye6 ivo vakanakira espresso nekofi.
Chipo chikuru uye chinofungisisa chezuva rekuzvarwa kweshamwari, Kisimusi, Zuva rekuonga uye mamwe mazuva asingakanganwike. Vachafadzwa kwazvo nezvido zvako zvepachokwadi uye pfungwa dzakanaka.
Inogona kucheneswa zviri nyore pasi pemvura inoyerera.
Haina lead uye zvimwe zvinokuvadza kumuviri wemunhu.
Zvinyorwa: Yakakwira Giredhi Girazi uye Nyowani pfupa china
Ruvara: yakawanda uye goridhe
Espresso girazi mukombe negoridhe mubato, Dia: 5.8cm H: 8.8cm, Kugona: 90ml
espresso van cleef saucer: Dia 14cm H 1.5cm, espresso glaze saucer: Dia 11.5cm H 1.8cm, espresso yakabikwa saucer: Dia 11.8cm H 1.8cm
Espresso / kofi girazi mukombe isina mubato, Dia: 5.8cm H: 9.2cm, Unyanzvi: 150ml
Zvitifiketi: FDA, SGS, LFGB, nezvimwe.
Kurongedza: shava bhokisi rine PET muvharo, ruvara bhokisi, chipo bhokisi nezvimwewo
Mharidzo yekufambisa nguva: Item sampuro ichave yakagadzirira mukati memazuva gumi nemashanu mushure mekubhadharwa kwasimbiswa.
Kugadzirwa kwekutungamira nguva: Tinogona kupedzisa kugadzirwa kwechinhu mune angangoita mazuva 45-60 ekushanda.
Pashure: Yakanakisa Dhizaini Dhizaini Kudya kwemanheru seti uye Chipo zvinhu
Zvadaro: zvedongo mukombe & saucer yakatarwa, 90cc Espresso Makapu nemaSuce, makapu ane Golden Handle, yeEspresso nekofi, nyowani pfupa china mukombe uye saucer
Kofi Mukombe NemaSuce
Mukombe Saucer Mira
Tea Mukombe Saucer Set
Mukombe Uye Saucer
zvedongo mukombe & saucer yakatarwa, 90cc Espresso Cu ...
Van Cleef chimiro Nyowani pfupa china Espresso mukombe ...
zvedongo mukombe & saucer yakatarwa, makapu neGolde ...